माछापुच्छ्रे बैंक र हेफर इन्टरनेसनलबीच सम्झौता - UrjaKhabar Urja Khabar - Nepal's No. 1 energy based online portal.
माछापुच्छ्रे बैंक र हेफर इन्टरनेसनलबीच सम्झौता
कार्तिक २८, २०७४ 495 ऊर्जा खबर/काठमाडौं
विपन्न वर्गमा कर्जा प्रवाह गर्ने विषयमा माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड र हेफर इन्टरनेशनल नेपालबीच मंगलबार सम्झौता भएको छ ।
कर्जा प्रवाह गर्ने सम्बन्धमा साना किसान, युवा स्वरोजगार, महिला उद्यमजस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्ने नीति अनुरूप यूकेएडद्वारा सञ्चालित सक्षम एक्सेस् टु फाइनान्स्सँग सहकार्य गरिएको छ । सोही परियोजना अन्तर्गत दाङका कृषि तथा महिला उद्यमीलाई बिनाधितो कर्जा प्रवाह गर्न बैंकले हेफरसँग सम्झौता भएको बैंकले जनाएको छ ।
सम्झौतापछि बैंकले हेफरको सहकार्यमा लमही दाङमा चार वटा विभिन्न सहकारी संस्थामार्फत कर्जा प्रदान गर्नेछ । विपन्न परिवारलाई स्वरोजगार बनाउने उद्देश्यले सञ्चालन हुने कार्यक्रमले कृषक तथा महिलाको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने विश्वास लिएको छ ।
बैकले पूर्व झापादेखि पश्चिममा कञ्चनपुर तथा हिमालदेखि पहाड र तराईसम्म आफ्ना ६२ वटा शाखा, ४ वटा एक्स्टेन्सन काउन्टर खोलेको छ । यस्तै, ७ शाखारहित बैकिङ सेवा गरी ७३ स्थानबाट ग्राहकमा सम्पूर्ण बंैकिङ सुविधा प्रदान गर्दै आएको छ ।